Nsogbu ọdịnala bụ:
1. Igwe eji igwe eji edochi anya ya: ihe nlere nke uzo ihe nlere bu ihe nlebara anya nke oma, igwe nke igwe adighi adi nma, ndu igwe adighi nma, ndu igwe adigh nma, ihe ndozi Z adighi anya, njehie diagonal bu nke buru ibu, ma akụkụ a họọrọ adịghị mma! Gbọala ahụ adịghị mma ma njehie na-eso ya buru oke ibu! Mmebi mbelata, mmebi akwarangwa nke a dịka mmịrị amị amada!
2. rakwanye igwe na-ete mmanụ na -eme ka eme: jiri mmanu mmanu, mmanu mmanu, mmanu igwe dinyere na mmanu ozo. Visterity bọta dị oke elu, nke na-abaghị uru igwe. Viscosity mmanụ ịkwa akwa dị ntakịrị, ọ na-emerụkwa onye na-agba agba. Ihe a na-ahụkarị bụ iji mmanụ injin, nke ga-emepụta sludge na unyi adsorb.
3. Ogologo oge eji mmanụ injin. A ga-enwe akwa nke edo edo na-acha uhie uhie n’elu okporo ígwè. You ga - achọpụta na oge ngbanye nke igwe na - emewanye nkenke, ihe a na-achọ na-abawanye ụba.
Ngwọta, jiri mmanụ pụrụ iche nwere teknụzụ graphene
1. Gbanyụọ sludge mmanụ siri ike na ngwa ngwa igbari sludge mmanụ nke mmanụ mmanụ dị ka mmanụ mmanụ
2. ubrụ ọrụ nke ọma ka ọ dị ike iji ụzọ edugharị ụzọ, ndị mmịfe, eriri mkpanaka, nne waya, akwa, mkpụmkpụ igwe, bea na akụkụ ndị ọzọ nke igwe ihe osise.
3. Ihe nchebe ọzọ Teknụzụ eji arụpụta ngwa ngwa na-echekwa ụzọ metal ma gbatịkwuo oge ọrụ 4. Nchebe Ọnọdụ PH dịpụrụ iche ma anaghị enwe acid ma ọ bụ ihe alkali, anaghị arụ ọrụ okporo ụzọ ntuziaka, ọ nweghị emerụ ahụ mmadụ!
1. Maka igwe ọhụụ eji eme ihe na mbu: tinye mmanụ na - eme mmanụ pụrụ iche n’ime ite mmanụ, ka ọ ghara ịkarị ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke ike ite mmanụ, iji zere nrụgide gabigara ókè na oke mmiri. Ma ọ bụ jiri mmiri ịgba mmiri ma ọ bụ ahịhịa kwa izu iji mee ha n'otu akụkụ akụrụngwa. Otu ugboro n'izu ma ọ bụ ọkara ọnwa.
2. Maka akụrụngwa ochie, a na-atụ aro ịsacha akụkụ ahụ tupu ojiji!
Oge nzipu ozi: Apr-24-2020